Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 00:55
747 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 12 Septambra 2019 à 06:25 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 00:55 (hanova) (esory)
=== Alahamady ===
Ny [[Alahamady]] no volana sy vintana voalohany amin'ny fanandroana. [[Renivintana]] ny Alahamady. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe االحمل / ''Al-Hamal'' ("ondrilahy") ny teny hoe ''Alahamady''. Ny zoro avaratra-atsinana amin'ny trano no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. MibabyNy nyfaritra Alohotsyna sytanàna mitrotroao avarara-atsinanan'ny Adaorotanàna nyiray Alahamadydia faatao mifandratrahoe amin'ny"Alahamadin-tany" Adimizanaho nefa ny mitanila eo aminan'nyio Asombolatanàna syfaharoa Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny izyio. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady sy ny vonto Alahamady ary ny vody Alahamady.
Lazana fa mibaby ny Alohotsy sy mitrotro ny Adaoro ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adimizana nefa ny mitanila eo amin'ny Asombola sy Alakarabo izay iandrianany sy iarenany ny vintana Alahamady. Amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Alahamady, dia vava Alahamady (na vavan'Alahamady) sy ny vonto Alahamady (na vonton'Alahamady) ary ny vody Alahamady (na vodin'Alahamady).
==== Ankapobeny ====
=== Adaoro ===
Ny [[Adaoro]] no vintana sy volana faharoa. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اثور / ''Ath-Thur'' na ''Ath-Thaur'' ("ombilahy") ny hoe ''Adaoro''. [[Zanabintana]] ny Alohotsy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano atsinanana no toerana omena azy. MifandratraLazaina fa mifandratra amin'ny Alakarabo sady mihataka sy miarina eo amin'ny Adimizana ny Adaoro. TrotroinAnkoatr'izany dia trotroin'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Adaoro. Mitondra tonon'andro roa ny Adaoro, dia ny vava Adaoro (na vavan'Adaoro) sy ny vody Adaoro (na vodin'Adaoro) . Inoana ho andron'afo na andro mandoro ny Adaoro.
==== Vava Adaoro ====
=== Adizaoza ===
Vintana sy volana fahatelo ny [[Adizaoza]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجوزاء / ''Al-Djuza'' ("kambana") ny hoe ''Adizaoza''. Zanabintana ny Adizaoza. Ny toerana omena azy dia ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano antsinanana. Eo amin' ny Adizaoza no fitoeran'ny sinibe ao an-trano. Ny [[Alakaosy]] no mifandratra amin' ny Adizaoza sady miarina eo amin'ny [[Adijady]]. Baben'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Adizaoza. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava Adizaoza (na vavan'Adizaoza) sy ny vody Adizaoza (na vodin'Adizaoza).
=== Asorotany ===
Vintana sy volana fahefatra ny [[Asorotany]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe <big><small>ا</small></big><small>سرطان</small> / ''As-Saratan'' na ''As-Sartan'' ("foza") ny hoe ''Asorotany.'' [[Renivintana]] ny Asorotany. Ny zoron-trano atsimo-atsinana no toerana omena azy. Mibaby ny [[Adizaoza]] sy mitrotro ny [[Alahasaty]] ny Asorotany. Mifandratra amin'ny [[Adijady]] nefa mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alakaosy]] sy [[Adalo]] izy. Mitondra tonon'andro telo ny Asorotany, dia vava Asorotany (na vavan'Asorotany) sy ny vonto Asorotany (na vonton'Asorotany) ary ny vody Asorotany (na vodin'Asorotany). Andro mahery ny Asorotany.
==== Vava Asorotany ====
=== Alahasaty ===
Ny [[Alahasaty]] no vintana sy volana malagasy fahadimy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اأسد / ''Al-Asad'' ("liona") ny hoe ''Alahasaty.'' Zanabintana ny Alahasaty. Ny tapany atsinanana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adalo sy miarina eo amin' ny Adijady ny vintana Alahasaty. Trotroin'ny renivintana Asorotany ny zanabintana Alahasaty. Mitondra tonon'andro roa ny Adizaoza, dia ny vava AdizaozaAlahasaty (na vavan'Alahasaty) sy ny vody AdizaozaAlahasaty (vodin'Alahasaty).
=== Asombola ===
Vintana sy volana fahenina ny [[Asombola]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe السنبلة / ''As-Sumbul'' ("virjina") ny hoe ''Asombola.'' [[Zanabintana]] ny Asombola. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano atsimo no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alohotsy]] sy miarina eo amin' ny [[Alahamady]] ny vintana Asombola. Baben'ny renivintana Adimizana ny zanabintana Asombola. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Asombola, dia ny vava Asombola (na vavan'Asombola) sy sy ny vody Asombola (na vodin'Asombola) .
=== Adimizana ===
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Mitrotro ny [[Alakarabo]] sy mibaby ny [[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia ''vava Adimizana'' sy ny vonto Adimizan ''sy ny vonto Adimizana'' ary ny ''vody Adimizana.''.
==== Vonto Adimpizana ====
Tononandro tsara ny vonto Alahamady (na vonton'Adimizana) ka ny zaza teraka eo dia ho mpanan-karena sy tsy maty vonoina.
==== Vody Adimizana ====
Ny vodiy Adimizana (na vodin'Adimizana) dia tononandro tsara ka ny zaza teraka eo dia ho tratra antitra raha tsy maty kely.
=== Alakarabo ===
==== Vava Alakarabo ====
Tokony misoronana akondro vokatra ny olona amin'ny vava Alakarabo (na vavan'Alakarabo) amin'ny maha vintam-bokatra azy. Ny zazavavy teraka vava Alakarabo dia ho maro anaka fa ny zazalahy kosa ho tratra antitra. Voalaza fa teraka tamin'ny vava Alakarabo ny mpanjaka [[Ranavalona II]].
==== Vody Alakarabo ====
Ny zazavavy teraka vody Alakarabo (na vodin'Alakarabo) dia ho maro anaka ihany koa ary ny zazalahy ho tratra antitra.
=== Alakaosy ===
Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' [[Zanabintana]] ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adizaoza ny Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. Baben'ny renivintana Adijady ny Alakaosy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakaosy, dia ny vava Alakaosy sy ny vody Alakaosy.
==== Vava Alakaosy ====
Atao hoe ''Alakaosibe'' ny vava Alakaosy (na vavan'Alakaosy) ao amin'ny volana Alakaosy. Amin'ny vava Alakaosy amin'ny volana Alakaosy no andro fanandratana ody sy sampy. Manao sorona ny mpitahiry ody mahery sy sampy. Ny vehivavy mbola tokony hiteraka koa dia tsy mihinan-kanina amin'ny vava Alakaosy mba tsy hiteraka Alakaosy. Ny zaza teraka vava Alakaosy dia hanoto ray aman-dreny, ka ahohoka ho faty na alam-bintana mba ho tratra antitra sy ho lehibe ary ho mpanan-karena.
==== Vody Alakaosy ====
Tsy mifankaiza firy amin'ny vava Alakaosy ny vody Alakaosy (na vodin'Alakaosy).
=== Adijady ===
==== Vava Adijady ====
Ny zaza teraka vava Adijady (vava Adijady) dia ho vitsy teny, noho izany dia tokony alam-bintana fandrao mijadina loatra ka tsy miteny.
==== Vonto Adijady ====
Heverina ho tsara vintana ny zaza teraka amin'ny vonto Adijady (vonton'Adijady).
==== Vody Adijady ====
Heverina ho tsara vintana ihany koa ny zaza teraka amin'ny vody Adijady (vodin'Adijady).
=== Adalo ===
==== Vava Adalo ====
Atahorana ho maty kely ny zaza teraka vava Adalo (vavan'Adalo).
==== Vody Adalo ====
Ny zaza teraka vody Adalo (vodin'Adalo) dia tsara vintana ihany ka ho tratra antitra na dia manan-toetra malahelohelo aza.
=== Alohotsy ===
Vintana sy volana faharoa ambin'ny folo ny [[Alohotsy]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe الحوت / ''Al-Hut'' ("trondro") ny hoe ''Alohotsy.'' Zanabintana ny Alohotsy. Ny tapany antsinana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Asombola]] sy miarina eo amin'ny [[Adimizana]] ny vintana Alohotsy. Baben'ny renivintana Alahamady ny zanabintana Alohotsy. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Alohotsy, dia ny vava Alohotsy (na vavan'Alohotsy) sy ny vody Alohotsy (na vodin'Alohotsy).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974856"